Ngoku iyafumaneka, kwi-beta, i-Adobe Illustrator ye-Apple Silicon | Ndisuka mac
Njengokuba iinyanga zihamba, abafana kwiAdobe bahlaziya nganye yazo zonke izicelo abazinikayo kwintengiso ukubenza bahambelane ngokwendalo neeprosesa ze-M1 zika-Apple. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, bayikhupha Inguqulelo yokugqibela de Adobe Photoshop, Inguqulelo eswele amanqaku amaninzi okongeza.
Ngoku lithuba lika Adobe Illustrator, isicelo sikabani I-beta yokuqala iyafumaneka ngoku Kwaye kuza kwiinyanga ezintathu emva kokubheja kokuqala ukuba iAdobe Premiere Pro, iNkulumbuso yeRush kunye noVavanyo, okuthetha ukuba i-Illustrator yintshontsho elibi lika-Adobe.
Njengakwiibhetas zangaphambili, iAdobe ithi i-beta yokuqala ye-Illustrator ehambelana neeprosesa ze-M1 zika-Apple zibandakanya uninzi lwemisebenzi esisiseko yenguqulelo yeeprosesa ze-Intel kwaye njengoko iinyanga zihamba, yonke eminye imisebenzi iyakwenziwa ukuze abasebenzisi kungafuneki baqhubeke nokusebenzisa iRosetta 2 kwimisebenzi ethile.
Kude kube ngoku, abasebenzisi kuye kwafuneka basebenzise i-Rosetta 2 enomzami wokulungisa ukuze basebenzise iAdobe Illustrator kwiiMacs eziqhutywa ziiprosesa ze-M1 zika-Apple. Njengakwifoto yeFotohop, uMzekeliso akaboneleli nje nge ukusebenza ngokukhawuleza, kodwa ukongeza, ukuthembeka kuye kwanda, ngokokutsho kwabo kwiAdobe.
Ukuba ungabasebenzisi beAdobe yokuDala amafu kwaye unenye yeekhompyuter ezintsha zika-Apple ezineprosesa ye-ARM, unako ngoku khuphela le nguqulo intsha kwikhompyuter yakho ngokusetyenziswa kweDesktop yeDesktop, apho zikwakhona nakwezinye iibheta ezikhoyo, okwangoku, ezifumanekayo kwezinye izicelo zomphuhlisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ngoku iyafumaneka, kwi-beta, iAdobe Illustrator yeApple Silicon